व्यावसायिक पेडीक्योर - तपाइँ कसरी यो कदम बाट कदम गर्न सक्नुहुन्छ | बेजिया
सुसाना Godoy | 12/09/2021 20:00 | सुन्दरता
के तपाइँ एक पेशेवर पेडीक्योर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? तेसैले आधारभूत चरणहरु को एक श्रृंखला पछ्याउन र तपाइँको घर मा आराम संग गर्न को लागी आफैलाई शुरू गर्न को लागी केहि छैन। यस प्रकार, तपाइँ तपाइँको लागी एक विशेष समय हुनेछ, एक अद्वितीय पल को आनन्द उठाउन र तपाइँको न nails को लागी एक राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न को लागी, किनकि तपाइँको खुट्टा लाई पनि यो आवश्यक छ।
यो सत्य हो कि गर्मी को मौसममा हामी सामान्यतया यो अधिक प्राथमिकता दिन्छौं, तर यदि शरद comesतु आउँछ, हामी यसलाई भाग्न दिनु हुँदैन। किनभने त्यो खुट्टाको स्याहार यो पनि आधारभूत छ र त्यस कारण को लागी, हामी यो बर्ष भर मा गर्न को लागी आवश्यक छ। यो कसरी गर्ने भनेर याद नगर्नुहोस् किनकि अब हामी तपाइँलाई सबै कुरा बताउँछौं।
1 खुट्टा नुहाउने तयारी गर्नुहोस्
2 पेशेवर पेडीक्योर: न Cut काट्नुहोस् र फाइल गर्नुहोस्
3 Cuticles र हिल्स को ख्याल राख्नुहोस्
4 तामचीनी को छनौट
5 अन्तिम स्पर्श
खुट्टा नुहाउने तयारी गर्नुहोस्
केहि अवस्थामा यो सधैं प्राथमिक कदम होइन, तर हाम्रो मा यो छ। किनकि यस तरीकाले हामी छाला नरम बनाउन सक्छौं जब यो केहि अपूर्णताहरु बाट छुटकारा पाउन को लागी आउँछ। तेसैले, एक ठूलो कन्टेनर मा एक सानो तातो पानी जस्तै केहि छैन कि हामीलाई दुबै खुट्टा राख्न को लागी अनुमति दिन्छ। तपाइँ आवश्यक तेल को केहि बूँदहरु सबै कोमलता तर सही विश्राम नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। तेसैले, तपाइँ पर्खनु पर्छ जब सम्म पानी लगभग चिसो हुन्छ। तेसैले तपाइँ सँधै कम्प्युटर मा कार्य प्रदर्शन वा तपाइँ जुन चाहानुहुन्छ को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
पेशेवर पेडीक्योर: न Cut काट्नुहोस् र फाइल गर्नुहोस्
तपाइँ धोईरहनुभएको छ र तपाइँको खुट्टा सुकेको पछि, यो न nail काट्ने को लागी जाने समय हो। याद गर्नुहोस् कि यो राम्रो छैन कि उनीहरुलाई गोलाकार आकार दिनुहोस् किनकि उनीहरु अवतार हुन सक्छन्, तर तपाइँ एक सन्तुलित कटौती को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ, ताकि पछि जब यो रंग को लागी आउँछ यो धेरै अधिक वर्दी देखिन्छ। निस्सन्देह, कटौती आफैं को अतिरिक्त, तपाइँ उनीहरुलाई फाइल गर्न को लागी आवश्यक छ। यो कदम को लागी आवश्यक छ कि कुनै न कुनै भागहरु वा किनारहरु लाई सधैं बाहिर निस्कने को लागी सक्षम हुन को लागी।
Cuticles र हिल्स को ख्याल राख्नुहोस्
क्युटिकल दुबै हात र खुट्टाको अर्को महत्वपूर्ण भाग हो।। तेसैले, तपाइँ उनीहरुको हेरचाह गर्न को लागी यदि तपाइँ तिनीहरूलाई हटाउन चाहनुहुन्न। तपाइँ के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ती मध्ये प्रत्येक मा तेल को केहि थोपा लागू हुन्छ। ताकि हामी उनीहरुलाई नरम बनाउन सक्छौं। लाभ लिनुहोस् र सम्पूर्ण खुट्टा मालिश, ऊँची एड़ी को भाग जोड। किनकि यो अर्को एक हो कि हामीलाई समस्या दिन र केहि दरारहरु देखा पर्न सक्छ। तेसैले, तपाइँ हाइड्रेशन लागू गर्न को लागी आवश्यक छ र एक pumice ढु for्गा को लागी मृत छाला लाई अलविदा भन्न को लागी जानुहोस्। एकचोटि तपाइँले गर्नुभयो, एक मॉइस्चराइजर लागू गर्नुहोस्।
तामचीनी को छनौट
कहिलेकाँही हामी न nails मा एक पोलिश राख्न सक्छौं जब उनीहरु एक नियमित रूप मा समाप्त छैन। यदि होईन, तपाइँ अब अन्तिम चरण मा शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ, जुन रंग को आवेदन हो। यद्यपि पहिले मात्र, तपाइँ एक सुरक्षात्मक तह जोड्नु पर्छ र यो सुक्खा प्याट। यो तामचीनी को रंग छान्ने समय हुनेछ। तपाइँ एक चिकनी डिजाइन बनाउन वा यो कल्पना को एक स्पर्श दिन र एक रचनात्मक डिजाइन को लागी जान सक्नुहुन्छउदाहरण को लागी, ठूलो औंला को न nail मा। जे होस् तपाइँको छनौट, तिनीहरूलाई रंग र तिनीहरूलाई पुरा तरिकाले सुक्न दिनुहोस्। एक पटक सुख्खा भएपछि, तपाइँ चमक को एक परत लागू गर्न को लागी परिणाम लाई अझ धेरै हड्ताल बनाउन को लागी र एक लामो समय को लागी आवश्यक छ।
एक पटक हामीले तामचीनी लागू गरिसकेपछि, यो सत्य हो कि हामी यसलाई धेरै राम्रो संग सुक्न दिनु पर्छ। तर त्यहाँ एक अन्तिम चरण छ कि हामी अझै पनी लिनु पर्छ र त्यो हो, फेरी हामीलाई चाहिन्छ सबै खुट्टा मा moisturizer को एक परत मा शर्त। यो सत्य हो कि यो पहिले नै एक कदम हो कि हामीले लिएका छौं तर यो अन्तिम हुनेछैन। अधिक हाइड्रेशन, राम्रो छ त्यसैले यो यो शर्त गर्न को लागी समय हो। अब तपाइँ एक पेशेवर पेडीक्योर यो अभ्यास मा राख्न को लागी जब पनी र जहाँ पनी तपाइँ चाहानुहुन्छ। यो पक्का पक्कै यो जस्तो देखिन्छ जस्तो जटिल हुनेछैन!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » पेशेवर पेडीक्योर: कसरी यो कदम बाट कदम गर्न को लागी